LTP Marovoay: tsy nandray karama ny mpampianatra | NewsMada
LTP Marovoay: tsy nandray karama ny mpampianatra
Mitokona ny mpampianatra ao amin’ny lisea teknika Marovoay mivondrona ao anatin’ny sendikan’ny S3MF Boeny. Tsy nandray karama efa hatramin’ny volana janoary ireo mpampianatra. Efa nisy ny dinika natao tamin’ny tompon’andraikitra, saingy tsy nisy ny marimaritra iraisana, voalaza fa lany tamin’ny zavatra hafa ny vola raha ny fitarainan’ireo mpampianatra any an-toerana.
Tamin’ny alatsinainy teo, nivory ny mpampianatra ary nanapa-kevitra fa hafindra kilasy gaboraraka avokoa ny mpianatra amin’ny taona voalohany sy faharoa ao amin’ity lisea ity satria tsy nisy ny fanadinana noho ny fitokonana.
Manohana ny fitokonan’ny mpampianatra ity sendikà ity ary tsy manaiky ny fanadinana tandrametaka teren’ny fanjakana hatao. Tsy mbola voaomana tsara ny sain’ny mpianatra hiatrika izany fanadinana izany. Tsy tompon’antoka amin’ny fahapotehan’ny zaza vokatr’izany izy ireo, raha ny nambarany hatrany.
Omaly ihany, tao amin’ny Dren Voeny, niatrika fivoriana ny tompon’andraikitry ny fampianarana any an-toerana, niaraka amin’ny mpitarika ny Annefa nijery ny fanomanana ny fampandehanana ny fanadinana CEPE hatao amin’io herinandro io.